Isifuba senkukhu ehovini: zokupheka kunye nesithombe. Ukupheka isifuba senkukhu ehhavini ngegalikhi, ushizi, utamatisi, iziqholo
Inyosi yenkukhu kunye nengqolowa
Inyosi yenkukhu e-oven isitya esinqabileyo: ayikho iikhalori ezaneleyo, zikhona iiprotheni ezininzi ezintle, ukulungiswa kukukhawuleza, ukunambitha kuyamangalisa. Zonke iirephepheni ezineentsimbi zentente zilungele zona, kodwa phakathi kwamakhulu ezinketho kunzima kakhulu ukukhetha okulungileyo. Ukuze ungenzi iphutha ngokuzikhethela, kukufanele uqhelane nemigangatho yokubhaka inkukhu yenkukhu kwivenkile yasekhaya:
Imfuyo efanelekileyo yokupheka kwi-ovini isanda okanye ikhutshwe. Akunakwenzeka ukuba umzobo wobugcisa oza kuvela kwimveliso eqingqiweyo;
Ngaphambi kokutshatyalaliswa kwentsholongwane, iifayile kufuneka zihlanjululwe kakuhle. Kwinkqubo yokucoca, inkukhu ingabi yithenda kakhulu kwaye ilula, kodwa iyaneliswa yinto enyanzelisayo;
Akukho imfuneko yokubhaka ibhokhwe kwisibhakabhaka esingenanto, ngokuqinisekileyo kuya kuba nzima kwaye kunzima. Lungiselela inyama enesisa kwi-sleeve, kwi-foil okanye kwisitya esinganyangekiyo kunye nama-mushroom, kunye neetatayi, neinanphayinti okanye kwi-sauce efanelekileyo ukunambitha.
Sebenzisa indawo ehloniphekileyo yeziqholo kunye neziqholo. Ekubeni i-fletlet yenkukhu ngokwayo ayinayo i-flavored pronoun, kungcono ukusebenzisa imifino, i-garlic, umxube weepelepele, iziqholo ezizithandayo: i-basil, i-thyme, njl njl, ngexesha lokupheka.
Isifuba se-Chicken kunye neetatayi kunye ne-basil e-oven: iresiphi ngesithombe
Isifuba senkukhu esisiqhekeza, ebhaka ehovini kunye ne-basil eluhlaza, utamatisi kunye noshizi, uzakutshintshela okwethutyana kwi-Italia elikude. Inambitheka encinci yenyama enomileyo ayikwazi ukulibala. Esi sidlo silungiswe ngokukhawuleza kwaye sitshabalalisa ngokukhawuleza kwiiplate.
Inkukhu yobisi kunye neTatates
tamatisi omisiwe - 120 g
ioli yomnquma - 50 g
umthunzi omnyama nomhlophe
i-basil imifino - i-1 beam
i-mozzarella ushizi - 100 g
I-Feta ushizi - 100 g
iinkukhu ze inkukhu - ii-2
Utamatisi obomisiweyo obuswe ngelanga, zichithwe, i-basil ihlulwe, ushizi iphulwe okanye ihlulwe. Iibhokhwe ezinomhlanjeni ezomileyo zomelelwe ngepokothini kwaye zifakelwe izithako ezichotshoziweyo.
Ioli e-Olive ixutywe kunye neziqholo kunye noxolo ngomnyu. I-marinade ephumelayo iboshwe ngeenqwelo ezifakiwe kwaye ishiye imizuzu engama-30.
Ukushisa i-oven ukuya kwi-180C. Amabele amabisi ashintshwe kwi-pan yokukhenkcela okanye i-baking tray, ethululela intsalela ye-marinade. Bhaka i-fillet "ngesiTaliyane" ubuncinane imizuzu engama-30.
Isifuba senkukhu, ebhaka ehovini: iresiphi yokutya
"Inkukhu" inkukhu ayifanele ibe yintsha kwaye iyomile. Ukuba usebenzisa iresiphi elungileyo, i-fillet, ebhaka ehovini, iya kukukholisa kunye neempawu kunye nokumangalisa ngesakhiwo sayo esimangalisayo. Into ephambili ayikulibala ngokulinganisela.
iinkukhu ze-inkukhu - iziqwenga ezi-3
ioli yomnquma - 2 tbsp.
ibhotile - 1 tsp.
ityuwa ephantsi komhlaba - 0.5 tsp.
i-lemon - 0,5
Lubricate iphepha elibhakabhaka lokubhaka elinzulu kunye nesiqingatha seoli yeoli. Ishidi lephepha lesikhumba - ibhotela.
Ubisi lwebhokhwe luhlanjwe kwaye luomiswe ngethoyilethi. Hlanganisa ioli yeoli yomnquma kunye netyuwa kunye neziqholo. Ukutya ngokutya kunye ne-marinade kwaye ushiye kule fomu imizuzu engama-20-30.
Kwiphepha lokubhaka libeka iifomthi, kwicala ngalinye sineengcezu ze-lemon size sigubungele yonke into ngesikhumba (ioli ngaphakathi). Cinezela ngokukhawuleza ishidi kwiibele.
Bhaka inyama enomzimba wokutya e-oven, ifuthe kwi-180C ukusuka kumashumi amathathu ukuya kwimizuzu engama-40.
Sisebenzela izibopho, zicocwe, ngelayisi ephekiweyo okanye kwimifuno emitsha.
Isifuba esinezinkukhu esinomsoco ngeeshizi kwi-oven, iresiphi enomnandi
Inkukhu inyama kunye noshizi otyunyiweyo kukudibanisa kakuhle. Yaye ukuba uthe wongeza kuyo i-sauce encinci ye-saly, i-taste itya kuba yinto ebalaseleyo. Isifuba esenziwe nge-recipe enjalo ayinakuphangwa. Nangona esinye isithako sibeka ngaphezulu okanye ngaphantsi, umphumo uya kusamangalisa kwaye awuqhelekanga ngendlela yawo.>
ukhilimu omuncu we-fat content content - 3 tbsp.
I-cheese nzima - 150 g
i-soy sauce-2 tbsp.
ioli yomnquma okanye ioli yelanga - 2 tbsp.
Ukuze ulungiselele i-marinade enomnandi, udibanise ukhilimu omuncu, i-soy sauce, i-curry seasoning kunye neryuwa.
I-fletlet ye-chicken isuka, yinqumle kunye ne-pocket. Ngaphakathi, sibeka isikhephe esincinci okanye isahlulo seeshizi.
Inyama ngeeshizi ezenziwe ngokukhawuleka kunye ne-marinade kwaye simele kwindawo epholileyo imizuzu engama-40.
Sisasaza iphepha lokubhaka nge-ceramic ngeoli yeoli, sasaza iifomthi ezifakiwe kwaye sibhakale imizuzu engama-40 kwi-180 ° C.
Sisebenzela inkukhu ene-cheese ecibilikiweyo, ngokukhawuleza siyiphumle kwi-oven.
Isifuba se-Chicken kunye namazambane kwihhavini: isinyathelo ngeyiteyiphu
Isifuba kunye namazambane ehovini silungiselelwe sihamba kunye neziqholo eziqhelekileyo zaseCaucasian. I-hoops-suneli, i-zira, i-garlic kunye nomxube we-pepper iya kunika isondlo esondlo esinomsoco kunye ne-oriental, flavor flavor.
Ifayile yenkukhu - i-2 pieces
iifatata - iziqwenga 4-5
I-pepper yaseBulgaria - ii-2
igalikhi - amazinyo amahlanu
i-hops-suneli - 0,5 tsp
i-oyile yemifino - 2 tbsp.
ijusi lemon - 2 tbsp.
mix mix of pepper - pinch 1
Gcoba ibhokhwe ebomvu ibe ngamaqhekeza obukhulu obukhulu kwaye uhlambe kunye nomxube weoli yemifino nge-garlic eqoshiwe, ityuwa kunye neziqholo.
Emva kwemizuzu engama-15-20 siphume ipen, sibeke iingcezu zeebhatata ezihlanjulweyo kunye nezityu, i-pepper yaseBulgarian, inyama eselwandle. Gcwalisa isitya kunye ne-marinade esele kwaye ufefe ngejisi lemon.
Gubungela iphepha lokubhaka nge-foil, bhaka isitya nge-230C malunga nemizuzu engama-30. Imizuzu engama-10 phambi kokuba silungise ukususa eso sihloko, ukwenzela ukuba iifatata kunye nenkukhu zihlanganiswe ngekratshi.
Ncedisa isidlo esinomdla kunye ne-tomato sauce okanye i-ajika.
Isifuba se-Chicken kwi-oven kunye nephayinaphu, iresiphi enomnandi
Isifuba senkukhu enesonka kunye nesiqhamo esingavumelekanga salsa sisimangalisa ngesidlo saseSlavonic. Kodwa nantoni na, isidlo esinjalo siya kufumana ama-connoisseurs ngokukhawuleza kwaye sihlale kwincwadi yokupheka yentsapho. Enye into edibeneyo yile ndlela yokutya ivulela ithuba lokunandipha ukukhanya okubumnandi kwehlobo nakubusika obusika.
izibophelelo - iingcezu ezine
ioli yeoliva - 4 izinto ze l.
iipineapples ezichotshoziweyo - 1.5 tbsp
i-coriander - 1 ibhamvu
i-avocado echotshoziweyo - 1 tbsp
i-anyanisi ebomvu - 0.5 tbsp
imbewu yeesame - 2 tbsp.
ijusi ye-lime - 4 tbsp.
I-cumin yomhlaba - 1 tsp.
Inkukhu inyama ihlanjwe, idibene ngamaphilisi emaphepha kwaye igxutywe ngamacala omnquma. I-Solim, pepper, shiya ukuhamba.
Iicubus of ananas, i-onion kunye ne-avocado zixutywe kunye ne-cilantro eqoshiwe, imbewu ye-same ethosiweyo, iziqholo kunye nejusi ye-lime.
I-fillet ibhaka ehovini ngo-190 ° C ide iphekwe. Siyifumana, silinde de inyama ipholile.
Kuba isahlulo sesahlulo sibeka yonke into okanye siyabhalwa kwisiqingatha sesifuba, siphakamisela ukukhonzwa kwerinapple salsa. Siphatha iindwendwe zethu kwaye sizizonwabisa!
Uzonwaba obunzima: iindlela zokupheka ezintle ezisekelwe kwi-fucchose
Ama-Oriental motifs ekhitshini: indlela enhle ngayo ukupheka i-pilaw kwi-ngulube
Indlela yokutya i-pasta kunye nokulahlekelwa isisindo: iresiphi ye-pasta kunye nenkukhu kunye nemifuno evela kumculi uNatalia Gulkina
I-recipe yokupheka i-shrimp
Iindlela zokupheka ezilula zokuNyaka omtsha 2016: izitya ezingcono kwitafile zonyaka weNtsha kunye nesithombe
Ubuchule bokuqala kwabantwana buqala njani?
Iphupha: isiqhamo somtshakazi
U-Tamilla Agamirova noNicokolai Slichenko abangafaniyo
Kunokuba ukwanelise indlala xa usweleka?
Ukulungiselela ukususwa kweeplagi ze-sulfuric